Umenzi weprofayile yeAluminiyam -fscyal.com
Iprofayile yeAluminiyam ene-anodizing yeChhangyuan Aluminium ineeworkshop ezimbini zokuthambisa kunye neelectrophoresis. Iprofayili ye-aluminium ye-Anodizing yindawo esezantsi esetyenzisiweyo njenge-anode, kunye ne-electrolysis yenziwa kwisisombululo se-electrolytic, kunye nefilimu ekhuselekileyo ye-oxide yenziwe ngobuso kumphezulu we-substrate ukwenza i-alumina…
Iprofayile yeAluminiyam ene-electrophoresis
Iphrofayili yeAluminiyam ene-electrophoresisIprofayile yeAluminiyam ene-electrophoresis ivumela izinto zealumum zisetyenziswe njenge-anode kwaye ibekwe kwilatex enyibilikayo emanzini. Okwangoku ngqo kusetyenziswa ukufakelwa ngendlela engeyiyo umaleko wokhuselo womphezulu wefilimu ye-aluminium oxide ukwenza umbandela wombane wealuminium.
Iprofayile yeAluminiyam kunye neenkozo zomthi, penda kuqala ipeyinti yokuqala kwiprofayili yealuminiyam ekhutshiweyo, emva koko uncamathisele iphepha leenkozo zomthi ngaphezulu, kwaye usebenzise vacuum, ukufudumeza kunye nezinye iinkqubo zokwenza iinkozo zomthi zingene ngokupheleleyo kwi-primer yokutshiza. Kwinkqubo, ialuminiyam efana nokhuni…
Iphrofayili yeAluminiyam yokugubungela umgubo Umgaqo wenkqubo yokutshiza ngombane yeeprofayili zealuminium. Ukutyabeka umgubo kufafazwa phezu kobuso workpiece kunye isixhobo electrostatic umgubo wokutshiza. Ngaphantsi kwesenzo sombane ongashukumiyo, umgubo uya kuba adsorbed ngokufanayo phezu kobuso workpiece…